Kolestaroolka hoose - Diyaari cabitaannada guriga lagu sameeyo! | Bezzia
Cabitaanka guriga lagu sameeyo si loo yareeyo kolestaroolka
Susana godoy | 07/05/2022 14:00 | Tilmaamaha caafimaadka
Haddii laguu sheego inaad leedahay kolestarool sare, waa inaad sida ugu dhaqsaha badan u bilawdaa inaad is daryeesho. Sababtoo ah kolestaroolka sare wuxuu kordhin karaa halista cudurada wadnaha qaarkood. Si ballaadhan, waxa la odhan karaa heerarkeedu way kordhaan marka aynu ku dhaqano qaab nololeed fadhiid ah iyo cunto xumo. Maanta waxaan ku baraynaa sida loo yareeyo kolestaroolka!
Inkasta oo haddii ay ogaadeen, hubaal dhakhtarkaagu wuxuu ku siin doonaa tilmaamaha lagama maarmaanka ah si aad u sameyso. Laakiin sidaas oo ay tahay, waxaanu kuu sheegi doonaa in cabbitaanno taxane ah oo guriga lagu sameeyo oo aad wax ka beddesho caadooyinkaaga maalinlaha ah, aad ku gaadhi karto natiijooyin fiican. Hoos u deg shaqada si aad hoos ugu dhigto kolestaroolka sida ugu dhakhsaha badan!
1 Maraqa kaabajka guriga lagu sameeyo si loo yareeyo kolestaroolka
2 Cananaaska Smoothie
3 Casiirka miraha
4 tufaax iyo karooto
Maraqa kaabajka guriga lagu sameeyo si loo yareeyo kolestaroolka
Waxa laga yaabaa inay kuguula ekaato wax la yaab leh, laakiin waxaad shaki la'aan arki doontaa inay tahay mid ka mid ah fursadaha ugu fiican ee lagu macsalaamayn karo kolestaroolka sare. Xaaladdan oo kale waxaan u baahan doonaa kala badh kaabajka. Sababtoo ah tani waxa uu leeyahay xaddi aad u badan oo fiber ah iyo waliba fiitamiino,iyaga oo aan ilaawin in uu leeyahay biyo aad u badan,si ay inoogu ilaaliso fuuq-baxa.. Iyadoo dhinaca kale, 3 xabo oo toon ah ayaa sidoo kale loo baahan yahay, maadaama ay leedahay allicin, taas oo ah walax leh sifooyin nadiifin ah. Markaa haddii aan labada maaddooyinka ku shubno biyo yar, waxaynu yeelan doonnaa natiijo aad u fiican markaad qaadanayso maalin kasta subaxdii.
Waxaa laga yaabaa inaad akhrido uun, inaad ka yara jeceshahay tii hore. Hagaag, haddii ay sidaas tahay, hadda waa wakhtigaaga sababtoo ah waxay sidoo kale hoos u dhigi doontaa kolestaroolka. Xaaladdan oo kale waxaan u baahan doonaa saddex xabbo oo cananaaska ah. Sidaad ogtahay, tani Waxay leedahay fitamiin C waxayna u shaqeysaa sidii antioxidant. Markaa waxa ay la macno tahay in aanay u ogolaanayn in kolestaroolka xun uu ku dhego oo uu cudur keeno. Sidaa daraadeed, waxaan ku dhejineynaa seddexda xabbo ee cananaaska ee blender oo ku dar casiir liin nuskeed, koob biyo ah iyo qaado oo khal ah oo tufaax ah. Wax yar ilbiriqsi gudahood waxaad ku cabbi doontaa cabitaan aad cabbi karto dhowr jeer todobaadkii.
Isku darka dhowr miro ayaa had iyo jeer u ah war wanaagsan dhammaan faa'iidooyinka ay u keeni doonto caafimaadkeena. Sidaa darteed, haddii iyaga ka mid ah waxaan ka heli strawberries aad uga wanaagsan. Sababtoo ah waxay mas'uul ka yihiin hagaajinta shaqada antioxidant ee socodka dhiiggayaga. Marka, inta ay na daryeelayaan, waxaan sidoo kale dhadhamin karnaa casiir aad u gaar ah. Sababtoo ah kiiskan waa inaan ku ridnaa 100 garaam oo strawberries ah blender, oo leh kiwi iyo casiirka laba liin. Natiijo ahaan, waxaad heli doontaa cabitaan ay ka buuxaan fitamiino aad cabbi karto maalin kasta, haddii aad rabto inaad ku darto koobabka biyaha ee caadiga ah.
tufaax iyo karooto
Daraasaduhu waxay xaqiijinayaan in cunista dhowr tufaax ah maalin kasta ay caawiso dhimista kolestaroolka xun. Markaa, haddii aad jeceshahay inaad sidaas u cabto, laga yaabee in qaab ruxul ah, aan aad u badnayn. Sababtoo ah haddii aan sidoo kale ku darno dabacasaha oo ay ku jiraan maaddo sare oo fiilooyinka milmay, markaa waxaan yeelan doonaa isku dhafka gaarka ah ee hawshayada maanta. Waxaad gooyn kartaa labada tufaaxa iyo labada dabacasaha oo ku rid galaaska blender. Intaa waxaa dheer, waxaad ku dari doontaa koob biyo ah iyo lan celery ah. Markaad haysato wax kasta oo si fiican isku dhafan, waxaad cabbi kartaa oo aad ka faa'iideysan kartaa dhammaan hantideeda. Inkasta oo ay run tahay in haddii aad subaxdii qaadato, aad u fiican. Xusuusnow taas mar walba waxaad ku siin kartaa joogtaynta aad rabto, biyo badan ama ka yar. Maadaama ay jiraan dad badan oo doorbida ruxruxo aan aad u dhumuc lahayn. Dhammaan fikradahaas iyo jimicsi yar oo maalinle ah, waxaad hoos u dhigi kartaa kolestaroolka xun si dhakhso ah!
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » Tilmaamaha caafimaadka » Cabitaanka guriga lagu sameeyo si loo yareeyo kolestaroolka
4 tabaha si aad dhakhso iyo fudud ugu birto
Minimalism sida falsafada nolosha deegaanka